MPPT Solar Charge maamusha
Lagula soconayo Dream Taxanaha
Lagula soconayo Dream N Taxanaha
PWM Solar Charge maamusha
Taxanaha Dream Land
Sky Dream Taxanaha
Inverter oogidda Solar
Earth Dream Taxanaha
System Home Solar
Wuhan Welead S & T Co., Ltd waa shirkadda tamarta qorraxda isku dhafan takhasusay R & D, Soo saaridda iyo suuq-ilaaliyaal mas'uul qoraxda ee Wuhan China. Shirkadda waa CE, ROHS iyo IEC diiwaan gashan.
Iyada oo LDSOLAR brand diiwaangashan, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ilaaliyaal qoraxda PWM oo ay matalayaan Taxanaha Land Dream iyo Sky Dream Taxanaha, MPPT ilaaliyaal qoraxda oo ay matalayaan Dream Taxanaha lagula soconayo oo lagula soconayo Dream N Taxanaha.
Waxaan ku dadaalaysaa in ay baaritaan ku technology cusub ee nidaamka qoraxda. waxaan dhawaan ayaa ku soo dirato PWM la 32 gelinno processor, awood ilaaliyaal ah in ay ka shaqeeyaan si degdeg ah oo xasiloon. Waa technology a horeyn ka mid ah soo saarayaasha xakamaysada ah Chinese.
Waxaan u horseedi qoraxda, mustaqbal cagaar.
Si loo hubiyo in aad leedahay waayo-aragnimo fiican ee isticmaalaya xakamaysada ah, waxaan ay qaataan EN62109-1 cusub ee caadiga ah imtixaanka, 62109-2 iyo nidaamka maamulka tayada ISO9001 imtixaanka gudaha iyo dibadda si loo xakameeyo oo tayo leh.
waxyaabaha Our aan pervail kaliya ee suuqa hooyo hoostiisa horumarinta xafiiska iibka oo naga mid ah, laakiin sidoo kale ay helaan dadka ballaadhan ee South East Asia, Bariga Dhexe, South America, Africa iyo Yurub.
adeegga OEM iyo ODM ayaa la heli karaa, ku salaysan is aaminaad, waxaan ku dadaalaynaa in ay raadsadaan xaaladda guul-guul ah aad la. Waxaad had iyo jeer tahay soo dhaweyn nagu soo booqan laguugu sahlo.
Cinwaanka: aagga A 2f. NO.6 Changjiang Road Dhaqaalaha iyo Horumarinta tignoolojiga Zone Wuhan China